नाै नेता जसले एमाले हाँके
अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सदस्यमा कति मत पाए?
सचिवमा गोकर्ण विष्टले पाए सबैभन्दा बढी मत
ओली दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित, कसले कति मत पाए?
माओवादी प्रभाव क्षेत्रबाट उदाएर एमाले केन्द्रीय सदस्य बनेकी ३२ वर्षीया ईश्वरीको राजनीतिक यात्रा
निश्चित समूहको स्वार्थका लागि सर्वोच्च अदालतलाई बन्धक नबनाउन एमालेको खबरदारी
राष्ट्र ब्यांकका कर्मचारीको तलबभन्दा भत्ता धेरै, औसतमा एक कर्मचारीको भत्ता मात्रै मासिक ५० हजार
राप्रपा अध्यक्ष राणा तटस्थ बस्ने
यस्ता तथ्याङ्क दिनेछ जनगणनाले
देशभर कति नोट छन् चलनचल्तीमा?
जैविक विविधता: नेपालको अर्काे सौम्य शक्ति
वातावरण कमल मादेन
विविध भूबनोट, दुर्लभ जीव र वनस्पति प्रजाति रहेको नेपालको जैविक विविधताले विश्वकै निम्ति महत्त्वपूर्ण सम्पदाको आकर्षण बोकेको छ।
अनुसन्धानमा छुटाइएको वन फर्सी
हाम्रा अधिकांश वनस्पतिविद्ले विभिन्न जातजातिले प्रयोग गर्ने औषधीय गुणयुक्त वनस्पतिबारे अनुसन्धान गरेका छन्। तर, वन फर्सीबारे अनुसन्धान गरेको नपाइनु चाहिं अचम्म हो।
वनस्पतिको नाममा बाँच्नेहरू जैविक विविधताको अनुसन्धान, पहिचान र संरक्षणसँग सम्बद्ध नेपालीहरूको नाममा राखिएको वनस्पतिको वैज्ञानिक नामले उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा अमर बनाएको छ।
कसरी हुन्छ महबाट वनस्पति अध्ययन? महमा कुन कुन वनस्पतिका परागकण छन्, के कस्ता रसायन छन् र त्यो कुन भूगोलको हो भन्ने विषयमा गरिने अध्ययनले ठाउँविशेषमा कुन कुन वनस्पति प्रजाति छन् भन्ने पनि थाहा हुन्छ।
नेपालमा भेटियो विश्वकै नयाँ ऐंसेलु प्रजाति शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलन गरिएको ऐंसेलुको प्रजाति विश्वकै निम्ति नयाँ भएको पहिचान भएको छ।
‘होमो लङ्गी’ : कस्तो छ नयाँ मानव प्रजातिको खप्परको कथा? उत्तर-पूर्वी चीनको हर्बिनमा सन् १९३३ मा फेला परेको प्राचीन खप्पर नयाँ प्रजातिको मानवको हुनसक्ने वैज्ञानिकहरूले हालै सार्वजनिक गरेपछि मानव विकासको कथामा यसलाई महत्त्वपूर्ण अध्याय मानिएको छ।
कहिले शुरू भयो नेपालमा मकै खेती? मकै प्रजातिभित्र तीन वटा उप–प्रजाति रहेकोमा तीमध्ये पहिलो मात्र मकै हो। बाँकी दुई उप–प्रजातिलाई थियोसिन्टे भनिन्छ।
नरहरीबुटीले निको पार्दैन कोरोना, के हो ज्यानमारा ‘साइटाेकिन्स आँधी’? कोभिड-१९ बाट निधन हुनेमा ‘साइटोकिन्स स्टोर्म’ कारक भएको तथ्य सामु हुँदाहुँदै बिरामीलाई नरहरीबुटी सेवन गरेर निको हुन्छ भन्नु प्रधानमन्त्री ओलीले बेसार पानी, मरिच, अम्बाको पातले कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ भने जस्तै हो।
कति गुनी छन् कुसुम, गान्टे र रामगुवा? सामान्यजनलाई मात्र होइन, वनस्पतिविद्लाई समेत कमै मात्र जानकारी भएको डायोइसी प्रजातिका यी वनस्पति कुसुम, गान्टे र रामगुवाको संरक्षण र व्यावसायिक खेतीबारे स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ।
किन चाहिन्छ वनस्पतिको चित्र? सुन्दा आश्चर्य लाग्नसक्छ। तस्वीरभन्दा चित्रबाटै वनस्पतिको पहिचान प्रष्टसँग गर्न सकिन्छ, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पनि चित्रलाई नै बढी महत्त्व दिइन्छ। तर, हामीकहाँ वनस्पतिका चित्र बनाउनेहरू नै दुर्लभ छन्।
कहाँबाट कसरी आइपुग्यो नेपालमा गुराँस?
कहाँबाट कसरी आइपुग्यो नेपालमा गुराँस? संसारभर गुराँसका करीब एक हजार ५० प्रजाति छन्। नेपालमा भने ३३ प्रजाति पाइन्छन्। तीमध्ये दुई प्रजाति नेपालबाहेक अन्यत्र छैन। नेपालको पश्चिमी हिमाली भेगमा पाइने ती गुराँस ५० देखि ६० लाख वर्षपहिले हिमालय क्षेत्रमा उद्‌भव भएको मानिन्छ।
सुनाखरी चिन्दैन सरकार नेपालमा धेरै प्रजातिका सुनाखरी पाइन्छन्। यी सुनाखरीमा विभिन्न रोग निको पार्ने औषधीय गुण हुन्छन्। तर, फितलो नियम र नियमनले कतिपय सुनाखरी लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
कसरी जोगाउने जलथल जंगल ?
विचार कमल मादेन
प्रदेश १ सरकारले झापाको जलथल जंगल भएर सडक निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ, जुन जैविक विविधतायुक्त वनको संरक्षणमा चिन्ताको कुरा त हो नै, प्रचलित कानूनको प्रतिकूल पनि छ।
नेपालका रेड पान्डा अमेरिका र युरोपका चिडियाखानामा, लाभांशबारे सरकार बेखबर
अमेरिका र युरोपका कतिपय चिडियाखानामा नेपालबाट लगिएका रेड पान्डा (हाब्रे) राखिएका छन्। जैविक विविधता महासन्धि विपरीत उनीहरूले ती रेड पान्डालाई आम्दानीको स्रोत बनाएका छन्। तर, नेपालले ‘रोयल्टी’का लागि पहलै गरेको छैन।
जानकारी पाएको १७२ वर्षपछि भेटियो फिसटेल होया
जोसेफ डाल्टन हुकरले वैज्ञानिक अध्ययनका लागि सन् १८४८ मै तमोर नदी आसपासबाट फिसटेल होयाको नमूना संकलन गरेको उल्लेख गरेका थिए। घरभित्रको सजावटमा प्रयोग गर्न सकिने यो वनस्पति १७२ वर्षपछि काठमाडौ‌ंमा फेला परेको छ।
के जलथलमा भेटिएला त हराएको मुसे मृग ? अनुसन्धानदाताहरूका अनुसार अहिले नेपालमा मुसे मृग (इन्डियन सेभ्रोटिन) पाइने कुरामा ठूलो सन्देह छ। तर, जलथल जंगलमा खेले हुर्केका स्थानीयहरू केही वर्षअघिसम्म यो मृग आँखैअघि देखेको वर्णन गर्छन्।
नेपालमा पहिलो पटक भेटियो ‘हरियो परेवा’ ९ मंसीरमा वन्यजन्तु फोटोग्राफर देवेन्द्रकुमार खरेलले झापामा अचम्मको हरियो परेवा देखे अनि तत्काल तस्वीर र भिडियो खिचे। त्यो अचम्मको परेवा ‘ग्रीन इम्पेरियल पिजन’, नेपालमै अहिलेसम्म नभेटिएको नयाँ परेवाको प्रजाति।
मल्लेईमा अमर समरबहादुर मल्ल सन् १९८८ को एक दिन नेपाली र जापानी वनस्पतिविद् सम्मिलित टोली संखुवासभाको टासी गाउँ पुग्छ। वनस्पति विभागका विज्ञ एम.एन. सुवेदीसँगै दुई जापानी विज्ञ शिनोबु एकियामा र हिदेकी ओह्बासहितको त्यो टोली निरन्तरको खोज मार्फत नयाँ–नयाँ वनस्पति पत्ता लगाउने उद्देश्यमै त्यहाँ पुगेको थियो।
५० वर्षपछि देखियो यूरेसियन कर्ल्यू दुईदशक पहिलेसम्म नेपालमा सयौंकाे संख्यामा आउने पाहुना यूरेसियन कर्ल्यू चरा अहिले फाट्टफुट्ट मात्र देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा त ५० वर्ष जति पछि मात्र यो चरा देखियो ।
चिनौं जोगाउनैपर्ने गिद्ध तीन दशक अघिसम्म हूलका हूल देखिने गिद्धका चार प्रजाति अहिले संकटमा छन् । मुख्य कारण बनेका छन्– पशु उपचारमा प्रयोग औषधि र ठूला विकास परियोजना ।
सरोजकुमार कसजु अर्थात् थुन्बर्जिया कसजुवाना वनस्पतिको तस्वीर खिच्न सौखिन सरोजकुमार कसजुले नगरकोटमा खिचेको एउटा वनस्पति अहिले विश्वकै निम्ति नयाँ प्रजाति प्रमाणित भएको छ । यो वनस्पतिको न्वारान उनकै नामबाट गरिएको छ– थुन्बर्जिया कसजुवाना।
क्यान्सरको औषधि लौठसल्लामा विज्ञहरुकै 'लपनछपन' क्यान्सरविरुद्धको उपचारमा सबैभन्दा बढी निर्यात भइरहेको लौठसल्लाको प्रजाति ट्याक्सस् माइरेई नेपालमा भए\_नभएको बारे विज्ञहरुकै मनपरीले विद्यार्थी मात्र होइन, किसानसमेत प्रभावित बन्ने जोखिम छ।
हाम्रा जङ्गली पक्षी नेपालमा अहिलेसम्म घरपालुवा बाहेक करीब ८९० प्रजातिका पक्षी पाइएका छन् । ती मध्ये ४२३ प्रजातिले मात्रै नेपालमा बच्चा कोरलेको इतिहास छ।
हाम्रा गाईगाेरुका पूर्वज पोन्वार, खेरीगढ र बचौर जस्ता गाईगोरु कसरी आइपुगे? नेपालमा थप कति गाईगोरु छन्, उत्पत्ति स्थल कहाँ हो? जस्ता थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ यो पुस्तकमा छ।
मल्लेईमा अमर समरबहादुर मल्ल ‘मल्लेई’ सम्मानले नै पुष्टि गर्छ, लगातार १८ वर्ष वनस्पति विभागका महानिर्देशक बनेका डा. समरबहादुर मल्लले प्रशासन मात्र चलाएनन्, वनस्पति विज्ञानमा अविस्मरणीय योगदान पनि गरे।
सिक्किमेली फूलकाे इतिहास एशियाका कतिपय वनस्पति जातिको उद्गमस्थल हिमालयको पूर्वी भागलाई मानिन्छ । समयक्रममा ती वनस्पति चारैतिर फैलिए । चीनको हेङदुवाङ्ग पर्वत शृंखला यस्तै एक उद्गम हो, जहाँबाट गुराँस लगायत एशियामा पाइने थुप्रै वनस्पति जातिको उद्विकास भएको थियो ।